Yeyiphi indleko yokufumana ngokuchaseneyo nokugcina uMthengi? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 9, 2016 Douglas Karr
Kukho ubulumko obugqwesileyo bokuba iindleko zokufumana umthengi omtsha unokuba ka-4 ukuya kuma-8 amaxesha iindleko zokugcina Nye. ndithi ubulumko obugqwesileyo kuba ndiyabona la manani ahlala ekwabelwana ngawo kodwa soze ndifumane sibonelelo sokuhamba nawo. Andithandabuzi ukuba ukugcina umthengi kubiza ixabiso eliphantsi kumbutho, kodwa kukho okwahlukileyo. Kwishishini learhente, umzekelo, unokuhlala thengisa -Umthengi oshiye indawo yakhe unenzuzo enkulu. Kule meko, ukugcina umthengi nako xabisa imali yeshishini lakho ekuhambeni kwexesha.
Nokuba kwenzeka ntoni, uninzi lwezibalo luphelelwe lixesha ngenxa yefuthe labathengi kwiinzame zethu zokuthengisa. Imithombo yeendaba kwezentlalo, ubungqina kwi-Intanethi, iisayithi zokuphononongwa, kunye neinjini yokukhangela zibonelela ngokuhanjiswa okumangalisayo kwezithuthi kubathengi abatsha. Xa iinkampani osebenza nazo zonelisekile, bahlala bekwabelana ngenethiwekhi okanye kwezinye iisayithi. Oku kuthetha ukuba ukugcinwa okungalunganga kule mihla kuya kuba nefuthe elibi kwisicwangciso sakho sokufumana!
Ukufunyanwa kuthelekiswa neFomula yokuGcina (i-Annual)
Ireyithi yokuThengwa kwabaThengi = (Inani labathengi abashiya unyaka nonyaka) / (Inani lilonke laBathengi)
Ireyithi yokuGcina abaThengi = (Itotali yenani laBathengi-Inani labathengi abashiya unyaka nonyaka) / (Inani lilonke laBathengi)
Ixabiso leXesha lokuPhila loMthengi (CLV) = (Inzuzo iyonke) / (Ireyithi yokuThengwa kwabaThengi)
Iindleko zokuThengwa kwabaThengi (CAC) = (Uhlahlo-lwabiwo mali lweNtengiso kunye noThengiso kubandakanywa iMivuzo) / (Inani laBathengi lifunyenwe)
Iindleko zoTyelelo = (Ixabiso leXesha lokuPhila loMthengi) * (Inani laBathengi abalahlekileyo boNyaka)
Kubantu abangazange bazenze ezi zibalo ngaphambili, masiqwalasele ifuthe. Inkampani yakho inabathengi abangama-5,000 500, ilahlekelwa ngama-99 kubo ngonyaka, kwaye ngamnye uhlawula i-15 yeedola ngenyanga kwinkonzo yakho ngenzuzo ye-XNUMX%.
Ireyithi yokuThengwa kwabaThengi = 500/5000 = 10%
Ireyithi yokuGcina abaThengi = (5000 - 500) / 5000 = 90%
Ixabiso leXesha lokuPhila loMthengi = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00
Ukuba i-CAC yakho iyi- $ 20 ngomthengi ngamnye, oko kuqinile buyela kutyalo mali, echitha i- $ 10k ukubuyisela abathengi abangama-500 abaseleyo. Kodwa kuthekani ukuba unokonyusa ukugcinwa kwe-1% ngokuchitha enye i-5 yeedola kumthengi ngamnye? Oko kunokuba yi- $ 25,000 echithwe kwinkqubo yokugcina. Ingayonyusa i-CLV yakho ukusuka kwi- $ 1,782 ukuya kwi- $ 1,980. Ngaphezulu kobomi babathengi bakho abangama-5,000 XNUMX, ukonyuse nje umgca wakho ophantsi phantse kwisigidi seedola.
Ngapha koko, ukonyuka kwama-5% kumthengi # kwinqanaba lokuqwalaselwa lonyusa inzuzo nge-25% ukuya kwi-95%
Ngelishwa, ngokwedatha efakwe koku infographic evela kwi-Invesp, Iipesenti ezingama-44 zeenkampani zijolise ngakumbi #ukufumana ngelixa i-18% kuphela ijolise #ukuqwalaselwa. Amashishini kufuneka aqonde ukuba umxholo kunye nezicwangciso zentlalontle zihlala zibonelela ngexabiso ngakumbi kwindlela yokugcina kunokuba besenza ngokufumana.
tags: ukufumana ngokuchasene nokugcina kwakhonaIindleko zoTyeleloiindleko zokufumana abathengiukufunyanwa kwabathengi kuthelekiswa nokugcinwaIreyithi yokuThengwa kwabaThengiixabiso lokuphila kwabathengiukugcinwa kwabathengiizinga lokugcinwa kwabathengikwi-infographickwi
Imithombo yeendaba yePhoenix
Mar 10, 2016 ngo-1: 13 AM
Olu lwazi ngqo ebendilufuna. Enkosi ngokwabelana ngobuchule bakho!
Mar 15, 2016 ngo 12:12 PM
Ndiyabulela ukuba ndilifundile inqaku lenu. Oku kuya kuba nefuthe kwizigqibo zam ezizayo kwishishini lam. Sifuna ngokwenene ukubakhathalela abo banyanisekileyo kuthi.